Video+Sawir: Hoggaamiyaha Jabhadda Al Nusra oo Shaaciyay in ay isaga Baxeen Al Qaacidda Jamaaca Cusubna Ku Dhawaaqay.
Thursday July 28, 2016 - 17:50:11 in Wararka by Super Admin
War rasmi ah oo kasoo baxay Hoggaanka Guud ee Jabhaddii Al Nusrah ayaa lagu iclaamiyay in labedelay magacii Jabhadda islamarkaana dhiseen jabhad cusub oo islaami ah.
Hoggaamiya Al Nusrah Sheekh Max'med Al-Jowlaani
Sheekh Max'med Jowlaani ayaa ku dhawaaqay in ay isaga baxeen Ururka Al-qaacidda islamarkaana magacii Jabhadda Al-nusra lagu bedelay Jabhadda Fatxu Shaam, Kalimad Maqal iyo Muuqaal ah oo lagasii daayay Telefeshinka Afka Carabiga Ku Hadla ee Al Jazeera ayuu Sheekh Jowlaani uga hadlay arrimo farabadan.
Markii ugu horraysay sawirka Sheekh Max'med Al-Jowlaani ayaa labaahiyay isagoo ka hadlayay xaaladda wadanka Suuriya ayuu yiri "waxaan iclaaminaynaa in Magacii Jabhadda Al-Nusra laga guuray oo hadda kadib aan ku shaqeyn doono magaca Jabhadda Fatxu Shaam".
Mar uu soo hadal qaaday cilaaqaadka kala dhaxeeya Al Qaacidda ayuu sheegay in Jabhadda cusub aysan haba yaraateen wax xiriir dibadeed ah laheyn oo ay sii wadi doonto thowrada suuriya iyo Jihaadka Shaam.
isagoona Hoggaanka Al Qaacidda uga mahad celiyay sida ay u fahmeen maslaxadda dadka shaam oo ay u ogolaadeen in Jabhaddu ka baxdo Al Qaacidda.
Hoggaamiyihii Hore ee Jabhaddii la oran Jiray Al Nusrah ayaa ka shanqariyay ahdaafta jabhadda Cusub ee Fatxul Islaam wuxuuna sheegay in jabhaddan ay ka shaqeyn doonto sidii sharciga islaamka loogu maamuli lahaa Suuriya marka laga xureeyo nidaamka Faasidka ah ee Bishaar Al-asad madaxda ka yahay.
Wuxuu carrab dhabay in ahdaafta kale ee Jabhadda cusub loo aas-aasay ay tahay sidii laysugusoo dhaweyn lahaa Fasaa'isha Islaamiga ah ee dhulka Shaam.
Dhinaca kale war kasoo baxay Hoggaanka guud ee Urur weynaha Al Qaacidda ayaa Jabhaddii Al-Nusrah iyo Jamaacaadka kale ee Jihaadiga Suuriya loogu baaqay in ay dhistaan dowlad islaami ah.
Kalimad Maqal ah oo uu jeediyay Amiir ku xigeenka Al Qaacidda Sheekh Axmed Xasan (Abul Kheyr) ayuu uga hadlay xaaladda guud ee mandiqadda Shaam iyo dhibaatada heysata shacabka Suuriya.
Al Qaacidda ayaa markii ugu horraysay xaqiijisay in aysan caqabad ku aheyn midnimada Mujaahidiinta taas oo macnaheedu yahay in Jabhaddii Al Nusrah loo ogolaaday ka bixidda maamulka Al Qaacidda.
"Waxaan usoo Jeedinaynaa Hoggaanka Jabhadda Al Nusrah in ay horay u socdaan oo ay badbaadiyaan Jihaadka Ahlu-shaam oo ay qaataan go’aan munaasab ah”ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Qaacidda.
Kalimadda uu jeediyay Ku xigeenka Sheekh Ayman Al Dawaahiri ayaa dhammaan kooxaha Shaam ka dagaallama ugu baaqday midnimo iyo la wada qabsado Xariga Alle.
Hoos Ka Daawo Hoggaamiyihii Hore ee Jabhadda Al Nusrah